युगसम्बाद साप्ताहिक - विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत
Thursday, 11.21.2019, 11:06am (GMT+5.5) Home Contact
विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत
Tuesday, 09.09.2014, 05:31pm (GMT+5.5)
० नेपाल विद्यार्थी संघको एघारौ महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको मियोको रुपमा स्थापित नेपाल विद्यार्थी संघको एघारौ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि भदौ २९ गते काठमाडौमा उद्घाटन हुँदैछ । विद्यार्थी आन्दोलनको हिसाबले आठ वर्ष अगाडिदेखी महाधिवेशन नभएको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा संघको गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्ववियु जस्तो स्थापित विद्यार्थीहरुको अधिकार स्थापित गर्ने संस्थाको निर्वाचन गर्न नेतृत्वको जोडबल पुग्न सकेको देखिदैन । विद्यार्थी हक, हित तथा अधिकारको कुरामाभन्दा विद्यार्थी नेताहरु पार्टी नेताहरुको चाकडी र चाप्लुसीमा लाग्ने प्रवृत्तिको हावी भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा साथीभाइसंग भएको छलफल तथा अन्तरक्रियाले मलाई उम्मेदवार बन्न प्रेरित गर्याे । साथीभाइको हौसला र सुझावपछि मैले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।
० तपाईंकै उम्मेदवारी चाहिने कारण के हो त ?
म अघिल्लो पुस्ताका विद्यार्थी नेताहरु जो पार्टीको अमुक नेताहरुको इसारामा चल्ने र विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही किसिमले परिचालन गर्न चुक्ने गरेकाले दिशाहीन जस्तो भएको छ । तर अब मेरो नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघ यसको पृष्ठभूमि, सिद्धान्त र आदर्शलाई टेकेर अघि बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले म अगाडि बढेको हुँ ।
० के के एजेण्डा बोकेर महाधिवेशनमा जानुहुन्छ ?
महाधिवेशनमा हामीहरु विभिन्न मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर अगाडी बढ्ने छौं । खास गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरुको अन्त्य गर्ने, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाको प्रयोग, विश्वव्यापी शिक्षा पद्धतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्तिको उत्पादन, सुलभ तथा सबैको पहँुच पुग्नसक्ने शिक्षा, मर्यादित शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि ठोस कदम चालेर राज्यको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने विषयहरु नै हाम्रो एजेण्डा हुनेछ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुबीचको शैक्षिक आन्दोलनमा सहकार्य तथा वस्तुगत अवस्था अनुसार आन्दोलनहरु संचालन गर्न पनि यो महाधिवेशनले दिशा निर्देश गर्नेछ ।
० वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ।
नेपालमा शिक्षा पद्धतिको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने ०४६ को आन्दोलन पछाडि निकै सुधार भएको देखिन्छ । तर, आज विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हैसियतको शिक्षा नेपालमा स्थापित छैन । शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । व्यवसायीक शिक्षा नभएको कारण थुप्रै समस्याहरु आएका छन् । आज व्यवहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा नभएकै कारण शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा शिक्षालाई लिइन्छ । नेपालमा भएका स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्ने योजनाका साथ प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य व्यवसाय भनिएको कृषी क्षेत्र हो । यसमा अधिक ज्ञान दिन सकिएमा बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै घटाउन सकिन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा व्यवसायीक, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयमा आधारित हुनुपर्छ ।
० अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दोहोरो मापदण्ड चलेको छ । के यस्तो हुनु राम्रो हो र ?
हो, वास्तवमा हाम्रो शिक्षा नीतिले दुई किसिमको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । शहरमा महँगो बोर्डिङमा पढ्ने मन्त्री, हाकिम तथा खानदानीहरुको छोरा छोरीहरुले पाउने शिक्षा र दुरदराजमा रहेका गरिब–विपन्न वर्गको नागरिकका छोरा छोरीहरुले पाउने शिक्षाका बीचमा आकाश जमिनको अन्तर छ । यो आफैंमा विभेदकारी छ । यसका लागि समान अवसर तथा समान वितरणको सिर्जना गराउनु पर्छ । विभेदकारी शिक्षा नीतिमा परिर्वतन गर्नुपर्छ । शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीहरुले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाको बारेमा हामीले आवाज उठाउने मात्र होइन कार्यन्वयनका लागि दवाब समेत दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
० विद्यार्थी आन्दोलनमा दलीय हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यस्तै हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थी आन्दोलन निस्प्रभावी हुने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हो विद्यार्थी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढी नै भएको छ । विद्यार्थीले राजनीतिक हिसाबमा आफू अनुकुल राजनीतिक विचार तथा दर्शनहरुको वकालत गर्न सक्छन । यसो गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु दुर्भाग्य हो । सही बिचार तथा सही कार्यक्रमलाई निरुत्साहित बनाउन यस्तो कृयाकलापको अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले विद्यार्थी संघसंगठनलाई प्रभावकारी भुमिका खेल्न दिनुपर्छ । विद्यार्थी राजनीति भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको मुहान हो, यसलाई सफा गर्न हामी नै लाग्न जरुरी छ । स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सके बिना हस्तक्षेप निकै काम गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरुमा बौद्धिक हिसाबले शैक्षिक मुद्दामा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेमा हस्तक्षेपको संभावना कम हुन्छ ।
० विद्यार्थी आन्दोलनमा विकृतिहरु पनि छन् नि हैन ?
विद्यार्थी आन्दोलनलाई जब राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्छन त्यहाँ विकृतिहरुको जन्म हुन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो महाधिवेशन नभएको लगभग आठ वर्ष भैसकेको छ । यस बीचमा कहिले को नेता ? कहिले को नेताको आशिर्वादले नेता भएका छन् । तर अब हामीले नेपाली राजनीतिलाई समेत प्रत्यक्ष मार्गप्रशस्त गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेबिसंघको इतिहासलाई भुल्नु हुन्न । यसैलाई चिर्नको लागि यो एघारौ महाधिवेशनले नया किसिमको नेतृत्वको स्थापना गर्ने छ । यसमा सबैलाई ढुक्क रहन म आग्रह गर्दछु ।
० विद्यार्थी नेताहरु नै गुण्डागर्दी, चन्दा असुली जस्ता गलत क्रियाकलाप लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ नि ?
यो शक्ति भनेको आमूल पर्वितन गर्नसक्ने संभावना बोकेको शक्ति हो । यसमा क्रान्ति तथा परिर्वतनप्रति उच्च मनोवल छ । यसलाई भरपुर सदुपयोग गर्ने हो । तर यहाँ आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । राजनीतिक आडमा संगठनको महत्वभन्दा बढी आफूलाई केन्द्रमा राख्नेहरु यस्तो गलत कृयाकलापमा लाग्ने गरेका छन् । नेताहरुबाट पनि जस्ले यस्ता कृयाकलाप गर्न सक्छन उनीहरुलाई बढी अवसर दिने र इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा नै कतिपय अवस्थामा गलत कामहरु हुने गरेका छन् ।
० महाधिवेशनमा तपाईको अध्यक्ष उम्मेदवारीले के अर्थ राख्छ ?
मेरो उम्मेदवारी एक इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट विद्यार्थी नेताको रुपमा स्थापित गर्नु र भोलिको नेबिसंघलाई विद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिको लडाईमा शसक्त भुमिकामा ल्याउनका लागि हो । त्यस्तै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै विद्यार्थीको भरपर्दो संगठनको रुपमा नेबिसंघको स्थापनाकालदेखिको छवीलाई बचाइ राख्नका लागि पनि हो । प्रवृत्तिका हिसाबमा नातावाद, कृपावादको कारण ओझेलमा परेको मुद्दालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने मेरो दृढता हो । सारा कुरा बिग्रियो भनेर मात्र राजनीतिमा सुख पाइँदैन त्यसलाई सपार्न पनि त्यहाँ जानै पर्छ । बाहिर रहेर काम गर्न सकिन्न त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ । मलाई नेताहरुको आशिर्वादभन्दा बढी कार्यकर्ताको विश्वासमा भर छ । मेरो विद्यार्थी राजनीतिको आधार भनेको आम विद्यार्थीसंगको सहयात्रा हो । म नेपालका अति दुर्गम जिल्ला रुकुम, रोल्पा, डोल्पा, हुम्ला हुँदै तराई पहाड हिमाल सबै जिल्लामा पुगेको छु । सबै संग भलाकुसारी गरेको छु भेटघाटमा मैले विद्यार्थी आन्दोलनको कुराहरु स्पष्ट राखेको छु । त्यसैले मलाई विश्वास छ प्रतिनिधी मित्रहरुको विस्वासमा मेरो उम्मेदवारीले सार्थकता प्राप्त गर्ने छ ।
० आफुलाई अरु के के कारण योग्य भन्नुहुन्छ ?
म २०४६ सालदेखि नेविसंघको राजनीतिमा छु । विद्यार्थी राजनीतिको प्रारम्भदेखि नै नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तमा अविचलित लाग्ने युवाको रुपमा आफुलाई उभ्याइरहेका छु । क्रियाशिल विद्यार्थीको रुपमा आठ वर्ष अगाडि भएको महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ । त्यो बेला झिनो मतले पराजय भएको भए पनि मैले नेविसंघ राजनीतिमा शसक्त र क्रियाशील छु । शंकरदेव क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदा गरिएका कामका प्रशस्त अनुभव ममा रहेको छ । विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । शैक्षिक सुधारको काममा निरन्तर लागेको छु । रुक्मांगत प्रकरण तथा प्रचण्ड पुत्रको सगरमाथा आरोहण प्रकरणमा सडक आन्दोलनको अगुवाई गरेको ताजा स्मरण रहेको छ । नेपालमा पहिलो चोटि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको महत्वपूर्ण गोष्ठी संचालन गरेको छु । जसको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा तथा समापन चित्रलेखा यादवले गर्नुभएको थियो । इमान्दारीताका साथ काम गर्न सकेमा विश्वासको मत पाइन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
० अन्य प्रतिस्पर्धीको आधार कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि विद्यार्थी राजनीति भनेको प्रौढहरुले गर्ने हो । उमेरले पनि विद्यार्थी राजनीति गर्नलाई साथ दिनुपर्छ । विधानतः समयमै महाधिवेशन भएको धेरै नयाँ साथीहरुको उदय भैसक्थ्यो । विद्यार्थीहरुको बीचमा अनुमोदित हुनै नपर्ने गरी मनोनयन भएर पनि नेता हुन पाउने अवस्था अहिले आएको छ । आज म त्यही देख्छु लाइनमा लागेर हेर्दा लाग्छ विद्यार्थीहरुको बारेमा केही चिन्ता नहुने तर नेताको आशिर्वादको आशामा रहेका केही साथीहरुसंग मेरो प्रतिस्पर्ध निश्चित छ । म पूर्व विद्यार्थीहरुसंग क्रियाशील विद्यार्थीका रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाँदै छु । मेरो आधार बलियो छ र मेरो लक्ष्यलाई साथीहरुले विश्वासका समर्थन गर्नुहुनेछ ।
प्रस्तुती : भिम राई